दाइजो दिन्छु भन्दाभन्दै रुक्सराको हत्या भएपछि...
दाइजो दिन्छु भन्दाभन्दै रुक्सराको हत्या भएपछि…
बाँके, २३ वैशाख । गत बिहीबार झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी रुक्सरा कुरैसीको हत्या आरोप लगाइएको छ । नौ महिनाअघि साहेबे आलम कुरैसीसँग विवाह गरेकी रुक्सराले आत्महत्या गरेको जिकिर घर परिवारका सदस्यहरूले गरेका छन् तर माइती पक्षले भने हत्या भएको आरोप लगाएका हुन् ।
नेपालगञ्जमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै रुक्सराका बुबा इस्लाम अहमद कुरैसीले मागेजातिको दाइजो नदिएकै कारण उनको हत्या गरिएको जिकिर गरेका हुन्। भारत नारापारा घर भई कैलालीमा डेरा गरी बस्दै आएका साहेबेसँग विवाह गरेकी रुक्सरा गत बिहीबार झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । बुवा इस्लामले छोरीलाई मारेर झुण्ड्याइएको जिकिर गर्दै भने, ‘मैले हत्या हुनुअघि छोरीसँग फोनमा कुरा गरेको थिए । घर परिवारको अगाडि नै रहेकी रुक्सरा मसँग पनि राम्ररी बोलेकी थिइनन् ।’ माइती पक्षका अनुसार घर परिवारले दैनिक ‘टर्चर’ दिइरहेकाले रुक्सराले दुई दिनदेखि खाना खाएकी थिइनन् ।
घर परिवारले तीन लाख र एउटा पल्सर मोटरसाइकल दाइजो ल्याउन दबाब दिइरहेकाले आफू जग्गा बेचेरै पनि मागेको रकम र मोटरसाइकल दाइजो दिने मनसायमा रहेको उनको भनाइ थियो । हत्या भएको एक घण्टाअघि छोरीसँगको कुराकानीमा आफूले ‘म भोलि नै कैलाली आएर छलफल गर्छु ।
जग्गा बेचेरै भए पनि तीन लाख र मोटरसाइकल दाइजो दिउँला । अहिले परिवारसँग केही विवाद नगर्नू’ भनेको बुबा इस्लामले बताए । केही घण्टापछि नै फेरि फोन आउँदा छोरीले पासो लगाएर आत्महत्या गरेको जानकारी दिइयो ।
‘होचो टीनले छाएको कोठामा उनीहरू बस्छन् । त्यहाँ झुण्डिएर आत्महत्या गर्न सम्भव नै छैन । त्यसमा पनि सबै घर परिवार घरमै रहेको बेलामा मेरो छोरीले कसरी झुण्डिएर आत्महत्या गरिन्’, बुवा इस्लामले भने, ‘सबैले मिलेर घाँटी थिचेर मारेपछि झुण्ड्याइएको हो ।’ दाइजो दिन्छु भन्दा पनि छोरीको हत्या गरिएको उनको भनाइ थियो ।
यस्तो छ बुधबारदेखि शनिबारसम्मको माैसम पुर्वानुमान
इन्टर मिलानविरुद्ध मेस्सी नखेल्ने
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको अन्तिम दिनः विभिन्न ५ खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदै
१३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद: कुन देशले हालसम्म कति पदक जिते ?
आर्सनलले सानदार कमव्याक गरेपछि…
सागको समापनमा प्रम ओलीले विशेष सम्बोधन गर्ने !
संघीयताको संक्रमण छ भन्दैमा अख्तियार चुप बस्दैनः प्रमुख आयुक्त
नेपाललाई जुडोमा दोस्रो स्वर्ण, पुनमले ‘गोल्ड मेडल’ जितिन्
नेकपाले एक वर्षपछि स्थायी समिति बैठक बोलायो